Namoonni jaha haleellaa boombii Amboon shakkaman to'ataman - BBC News Afaan Oromoo
23 Guraandhala 2020
Madda suuraa, Gudeta Abebe
Magaalaa Ambootti hiriira paartii badhaadhinaa deggeruuf Sambata ba'ame irratti boombiin qaama hin beekamneen darbatamuun yoo xiqqaate namoonni 29 miidhamaniiru.
Komishinarri Poolisii Oromiyaa haleellaa kanaan wal-qabatee ibsa kennaniin namoonni haleellaa boombii kanaa raawwataniiru jedhamanii shakkaman jaha to'annoo jala oolaniiru jedhan.
Jiraataan magaalaa Amboo tokko akka BBC'tti himetti magaalaa Amboo fi aanaalee magaalattii marsanii jiranirraa namoonni walitti bahanii magaalattii keessatti hiriirri geggeeffamaa ture.
Hiriira kanarratti namoonni fardaan ba'uu kan nutti hime jiraataan kun namoonni deggersa paartii badhaadhinaaf hiriira ba'an irra caalaan kan aanaalee adda addaarraa fe'amanii dhufaniidha jedhe.
Amboo gara galgalaa, cuubeen nama diruun hammaate
''Ganamarraa ka'ee daandiin cufamee ture. Warra hiriira deeggarsaaf deeman qofaaf banaa ture. Kanuma keessaa warreen fardaan hiriiricha dabaaluuf deeman irratti qaama hin beekamneen boombiin darbatame. Namoonnii fi fardeen miidhamaniiru'' jedha namni kun.
Hoogganaan Waajjira Bulchiinsaa fi Nageenyaa magaalaa Amboo Obbo Hinsarmuu Dalaasaa, rakkoon dhuguma mudachuu dubbatan.
''Hiriirtota hedduu, ummata lafoo fi kanneen fardaan imalaa turan irratti boombiin eessaa akka dhufee fi eenyu akka darbate hin beekamne dho'eera. Namoonni 29 akkasumas fardeenis dho'iinsa boombiitiin miidhamaniiru."
"Namoonni miidhaman Hospitaala Amboo seenanii wal'aanamaa jiru. Hedduunsaanii fooyya'anii gara manaa deebi'aniiru. Muraasni ammallee yaalamaa jiru. Wanti lubbuudhaaf nama sodaachisu hin jiru.'' jedhan.
Waa'ee namoota miidhamanii Hospitaala Amboo seenanii iyyaafachuuf gara hospitaalichaatti bilbillus argachuu hin dandeenye.
Boombii darbatameef namoonni shakkaman to'atamaniiru kan jedhan Obbo Hinsarmuun, ''wayita namoonni tuutaan gara isteediyemii seenaa turan, namoonni muraasni duubaan imalaa turan. Boombiin kun kan darbame isaan keessaati," jedha.
"Ammaaf nuti kan shakkinu humna hidhatee bosona jiruudha. Sababiinsaa humni hidhatee bosona jiru tibba kana magaalaa Amboo seeneera odeeffannoo jedhu qabna turre.'' jedhan.
Boombiin kun kan darbatame Hoteela Malkaa Amboo fuulduratti ta'uu kan dubbatan Obbo Hinsarmuun sababa kanaan hiriirri adda hin cinne jedhan.
Rakkoo Nageenyaa: Amboo gara galgalaa, cuubeen nama diruun hammaate
1 Amajjii 2020
Viidiyoo, Muummichi Ministiraa Dr Abiy daawwannaa Ambootti taasisan keessaa taateewwan muraasa
‘Karchallee’ Amboo kaleessaafi har’a
Paartiin IZEMA rakkoolee filannoo irratti na mudatan jedhe tarreesse
21 Waxabajjii 2021
'Adeemsi Boordii Filannoo abdii guddaa waan namatti horudha’
Guutuu Waayyoo -Simbira Booranatti qofaa argamtu beektu?
Bu'aan Filannoo biyyaalessaa jahaffaa Itoophiyaa yoom beekama?
Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad eenyudha?
Yeroo dhuma kan haaromfame: 27 Sadaasa 2020
Yeroo maqaan biyyattii waraanaan ka'aa jirutti, filannoo MM Abiyyi kan jalqabaa